220㎡ Trano ambany rihana ambany rihana ambany rihana ambany, endrika maoderina maoderina | Hongfu Gauge Design
Home / Blog / 220㎡ Trano ambany rihana ambany rihana ambany rihana ambany, endrika maoderina | Hongfu Gauge Design
2021 / 05 / 28 FisokajianaBlog 3192 0
“Ny antony lehibe nahatongavanay hiala ny korontana ao an-tanàna mankamin'ny toerana misy tontolo iainana tsara dia ny fitadiavana tombontsoa ho an'ny zanakay roa. Ankehitriny dia manana zaridaina eo anoloana sy ao an-tranonay izahay, ary amin'ny fialantsasatra main'ny masoandro dia handeha hitsangatsangana sy hiara-milalao amin'ny valan-javaboary akaiky izahay mianakavy. Fitahiana lehibe tokoa ny fiainana anaty tontolo ahafahantsika mahatsapa ny vanim-potoana miova. Malalaka kokoa isika, aleontsika ny hakantony sy ny fahalehibiazana, ary koa ny fahatsorana sy panache, ary manome lanja ny andro amin'ny hafanana sy hazavana. ”
Raha jerena fa ireo villa tsy miankina matetika dia mijaly noho ny tsy fisian'ny hazavana sy ny haizina ary ny hamandoana ateraky ny tsy fisian'ny rivotra sy ny rivotra ao an-trano, dia nandinika sy nanamboatra ireo olana voalaza etsy ambony ireo izahay hatramin'ny niandohan'ny fidirana. Misy rihana roa etsy ambony sy ambany, ny rihana voalohany dia ny faritra ifandraisan'ny besinimaro, zaridaina, efitrano fidirana, efitrano fandraisam-bahiny midina, efitrano fisakafoanana ary lakozia. Ny fampiasana toerana fotsy, marbra voajanahary ary fampisehoana an-tsary tsy voaravaka dia manazava ny habaka, avaratra atsimo atsimo ary manankarena zavakanto maro. Ny lamina dia misy fanaka ambany arak'izay azo atao, ary ny sakan'ny habaka dia omena valin-jiro sy fanaka malefaka misy haavo samy hafa. Ny rihana faharoa dia asa manokana sy toeram-pialan-tsasatra bebe kokoa, ary ny habaka tsirairay dia namboarina indray ary kasaina hanolotra fomba manokana.
Rehefa mody ny vehivavy rehefa avy naka ny ankizy tany am-pianarana dia manomboka ny fotoana falifaly ao amin'ny fianakaviana. Ny tantara vaovao sy ny fahatsiarovana taloha dia mitohy mifamatotra, lasa fahatsiarovana mahafinaritra ny fianakaviana.
Ny habaka mitsambikina midina dia manomboka amin'ny fananganana endrika sy geometrika. Aorian'ny fanovana ny làlan'ny tohatra, avela fotsy ny rindrina amin'ny faritra midadasika mba hanitarana ny fahatsapana habaka. Ny rindrin'ny fahitalavitra dia natao ho endrika miolaka, ary hatramin'ny lavitra ka hatramin'ny akaiky, ny rindrina miolikolika dia manova ny làlan'ny hetsika mahitsy sy ny fahitan'ny atmosfera ny habaka anatiny aorian'ny nidiran'ny olona. Rehefa sarina ny ambainy, ny varavarankely mazava sy mangarahara amin'ny gorodona dia mampiseho ny maitso any ivelany hatramin'ny farany avo indrindra, izay mivelona amin'ny fiainana andavanandro sy fombafomba.
Ankoatry ny fotoanan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka, ny fotoana ho an'ny olona roa dia tena zava-dehibe ihany koa. Miresaka, mijery sarimihetsika, mandravaka ny trano. Raha mbola miaraka ianareo roa dia misy foana ny fahatsapana ny firindrana mirindra.
Raha heverina fa handany fotoana be dia be amin'ny filalaovana efitrano fandraisam-bahiny ny ankizy mandritra ny fotoana fialan-tsasatra dia misafidy fanaka ambany azo antoka kokoa izahay handrafetana ny firafitry ny habaka. Hanova ireo zavatra haingon-trano eny amin'ny habakabaka izy mivady arakaraka ny toe-tsain'izy ireo, ary ny sideboard akaikin'ny sofa dia ampiasaina hihazonana divay. Ny mankafy sy miala sasatra no fihetsika raisin'izy ireo amin'ny fiainana.
Ny famakiana ny fisalasalana ateraky ny minimalism matetika, ny fampiasana ny tsipika madio, ny chandelier linear, ary ny latabatra fisakafoana misy zavakanto dia miara-miasa mba hamoronana atmosfera maoderina sy maoderina.
Makà fotoana hiarahanao misakafo maraina miaraka amin'ny zanakao ary ento any am-pianarana izy ireo. Rehefa tonga any an-trano ianao dia karakarao vetivety ireo zavamaniry. Fotoana fialan-tsasatra feno fahafinaretana ity.
Ny lavarangana velona dia atambatra amin'ny lakozia mba hanitarana ny isan'ny fampiasana. Amin'ny lafiny ankavia sy havanana dia faritra kabinetra 5210mm sy 2723mm, miaraka amin'ny fahafaha-mitahiry lehibe hitazomana ny lakozia ho madio sy milamina amin'ny fotoana rehetra. Ary farany, misy velarantany velona 9.3m² atsangana atsangana. Izy io dia mizara ho an'ny varavarana misosa fitaratra, izay manome hazavana tena tsara amin'ny toerana fivezivezena.
Ny efitrano fatoriana faharoa amin'ny rihana voalohany dia toeram-ponenana vonjimaika ho an'ny fianakaviana sy ny namana, ary mifanila amin'ny zaridaina fidirana, miaraka amin'ny hazavana voajanahary be dia be. Voalohany indrindra, ny loko mamirapiratra fotsy sy malefaka dia mamorona atmosfera mahafinaritra sy mafana, ary avy eo manampy sary hosodoko mena mba hahatonga ny habaka ankapobeny ho endrika kanto maoderina kokoa.
Ny tohatra dia vita amin'ny vera sy marbra, ary ny loko voajanahary dia ampiarahina amin'ny sary hoso-doko manga any Mykonos namboarin'ny vadin'ny trano, izay mampifanaraka ny maha-lahy sy maha-vavy ary mahatonga anao hahatsapa ho tantaram-pitiavana sy lalina.
Ny habaka fandinihana dia natsangana mba hanitarana ny velarantany manontolo amin'ny 10m² ka hatramin'ny 20.4m², miaraka amina varavarankely roa miendrika L miorina amin'ny valin-drihana mba hanazavana ny mazava sy hamirapiratra. Ny ambony dia noso-doko tamin'ny manga Delft, izay manalemy maso ireo tara-pahazavana miorina amin'ny trano.
Izy io koa dia faritra fampiasan'ny fianakaviana efatra mianadahy amin'ny rihana faharoa, miaraka amin'ny toerana malalaka ho an'ny tompona vehivavy hiaraka amin'ny zanany roa amin'ny entimodiny sy ny fianarany. Ny fidirana dia natao ho toy ny faritra hijerena lambam-baravarana ary hipetrahana seza mampiadana.
Ny faritra terrain tany am-boalohany dia nampidirina tao amin'ny efitrano malalaky ny efitra fatoriana mba hampiasana miaraka. Ny varavarankely dia navadika ho varavarankely feno hatramin'ny valin-drihana mba hamela hazavana bebe kokoa. Ny gorodona sy ny vita amin'ny hazo dia mitana andraikitra lehibe, ka miteraka toetra voajanahary sy voadio. Ny palitao miloko marevaka sy miroboka dia mitazona ny fahasarotana sy ny fanelingelenana.
Ankoatra ny famoronana rivo-piainana milamina sy ahazoana aina, ny efitrano fatoriana lehibe dia miasa ihany koa. Ny habaka nitarina dia misy lalimoara 4760mm misy latabatra fiakanjo 1290mm. Eo anelanelan'ny fandriana sy ny fandroana lehibe dia namboarina ny lalimoara miendrika L 2930mmx1050mm, izay mahafeno tanteraka ny fitehirizana akanjo, kitapo ary entam-pianakaviana amin'ny vanim-potoana miova.
Samy hafa taona ny zaza roa, ka samy nisafidy ny lokony sy ny fitaovana ilaina amin'ny fanaka sarotra sy malefaka, mba hahafahan'izy ireo mandray sy mampifanaraka ny tranony vaovao haingana kokoa.
Ny zokiny dia 10 taona, ary ny efitrano dia mitohy mifangaro fotsy fotsy sy manga Mixnor, mamorona fahatsapana ambaratongam-pahefana ary koa mamirapiratra amin'ny angovo sy ny eritreritra.
Ny zandriny dia 5 taona, ho an'ny ankizy kely, ny rivotra malefaka, maivana, mifoka rivotra ary mahazo aina dia afaka manome azy ireo filaminana. Izany no antony handravahana ny efitrano miaraka amin'ny loko maitso cardamom malefaka. Ny sticker 3D habakabaka namboarin'ilay tompona vehivavy dia apetaka amin'ny rindrina, mba hahafahan'ny tontolon'ny zaza manana ny nofinofy mahafinaritra ny lanitra.
▲ Ny firafitry ny rihana voalohany
▲ Ny drafitra voalohany
▲ Ny firafitry ny rihana faharoa
▲ Ny drafitra faharoa
ovay ny toeran'ny fidirana sy ny vavahady faharoa, ary amboary ny toerana fitahirizana telo amin'ny alàlan'ny fanovana ny rindrina.
ovay ny toerana misy ny tohatra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mitsambikina kokoa mba hahamora kokoa ny tsipika fiainana.
manitatra ny faritra an-dakozia ary manitatra ny toerana misy ny lavarangana velona.
ny efitrano fatoriana faharoa amin'ny rihana faharoa sy ny lavarangana velona teo akaikiny dia natambatra ary novaina ho efitran-jaza roa.
manova ny toerana am-baravaran'ny efitrano fatoriana tompony mba hahatonga ny tsipika fiasa ho malama kokoa ary hampiditra ny lampihazo hampitombo ny faritra fampiasana. Ny rindrina fandalinana dia nafindra 50mm hampiasaina ho toerana fitahirizana, ary farany nitarina ny efitrano fidiovana lehibe indrindra hihaonana amin'ny lahasa efatra amin'ny kabinetra fidiovana, fidiovana, koveta fandroana ary fandroana hamoronana efitrano lehibe.
ovao ny tranobe ary atsangano ny efitrano fianarana amin'ny 10m².
Style: karazana trano maoderina: efitrano dimy sy efitrano roa
Fomba fanompoana: famolavolana feno + fanamboarana
Adiresin'ny tetikasa: Chengdu. Fudi Yonghu Bay
Ekipa mpanompo: Chengdu Hongfuji Design
Previous :: Ny haingo amin'ny efitrano fandroana an'ireo 16 "Andininy antsipirihany", manao ny mety, dia mahavonjy antsasaky ny raharaha Next: Sahirana, mpanaingo no nanome ireto famolavolana vavahady manaitra ireto
2021 / 07 / 19 838
2021 / 06 / 08 2730
2021 / 04 / 22 4673
2021 / 04 / 22 3828
2021 / 04 / 21 3745
2021 / 04 / 12 3276